AHOANA NY FOMBA HAMAHANA NY OLANA AMIN'NY INTERNET AMIN'NY WINDOWS 10 (VAHAOLANA 9 HANAMBOARANA) - TAREHIMARIKA
Ahoana ny fomba hamahana ny olana amin'ny Internet amin'ny Windows 10 (Vahaolana 9 Hanamboarana)
Tsy mandeha ny Internet Windows 10, iray amin'ireo olana mahasosotra indrindra mety hatrehana ianao. Raha matetika ny solosainao na ny solosainao findainy very ny fifandraisana Internet aorian'ny fametrahana ny fanavaozana Windows farany na mifandray amin'ny Internet (WiFi) Fa tsy misy fidirana amin'ny Internet, tsy afaka mizaha pejy web. Eto amin'ity lahatsoratra ity izahay dia manampy anao hivaha olana amin'ny Internet sy ny fifandraisana eo amin'ny tambajotra amin'ny Windows 10
Hevitra ato Anatiny FAMPISEHOANA 1 Fa maninona no tsy mandeha ny internet-ko? rOA Ahoana ny fomba hamahana ny olan'ny fifandraisana amin'ny Internet 2.1 Atombohy ny fitaovana tambajotra 2.2 Mihazakazaha ilay mpikirakira tambajotra 2.3 Ampifanaraho amin'ny DHCP ny adiresy IP mety 2.4 Avereno ny tamba-jotra sy ny TCP / IP stack 2.5 Ampidiro amin'ny Google DNS 2.6 Atsaharo ny mpizara proxy 2.7 Mametaka adapter tambajotra 2.8 Hanova ny toerana fitantanana herinaratra 2.9 Avereno ny fametrahana ny tambajotra
Naoty: azo ampiharina ihany koa ny vahaolana etsy ambany manala olana olan'ny fifandraisana eo amin'ny tamba-jotra (Samy fifandraisana Wireless sy ethernet) amin'ny am-baravarankely Solosaina 10, 8.1 ary 7.
Fa maninona no tsy mandeha ny internet-ko?
Ny olana eo amin'ny tamba-jotra sy ny fifandraisana amin'ny Internet dia mitranga indrindra noho ny fikirakira tambajotra diso, mpamily adaptatera tambajotra efa antitra na tsy mifanaraka. Ny rakitra rafitra simba indray, ny fanavaozana ny buggy na ny rindrambaiko Security dia miteraka olana amin'ny fifandraisana amin'ny Internet sy ny tambajotra amin'ny Windows 10.
ny fomba hanafainganana chrome amin'ny windows 10
Raha mahatsikaritra ny Windows 10 mifandray amin'ny Internet ianao ary azo antoka ny fifandraisana, nefa tsy ho afaka hiditra amin'ny tranonkala ianao. Ireo olana ireo dia matetika vokatry ny fiparitahan'ny TCP / IP diso, adiresy IP, na cache cache resolver client.
Ahoana ny fomba hamahana ny olan'ny fifandraisana amin'ny Internet
Alohan'ny hanombohana dia andao aloha hizaha ny fifandraisana malalaka. raha mifandray amin'ny tamba-jotra LAN ny fitaovanao dia zahao ny tariby ethernet mifandray tsara. Raha manana switch tsy misy tariby ara-batana ny solosaina findainao dia alao antoka fa tsy voadona amin'ny toerana tsy misy azy io.
Atsaharo vetivety ny antivirus na firewall an'ny antoko fahatelo ary alao antoka fa hiala ao VPN (raha napetraka amin'ny fitaovanao)
Raha mifandray amin'ny tamba-jotra Wireless (WiFi) ianao, dia hisy fiantraikany amin'ny fahombiazan'ny fifandraisana WiFi ny elanelana misy eo amin'ny fitaovana sy ny teboka fidirana tsy misy tariby. Afindra manakaiky ny router ny fitaovanao ary jereo raha voavaha ilay olana.
Hamarino tsara fa tsy mandeha ny maody Airplane, raha alefa ny maody fiaramanidina dia tsy ho afaka hifandray amin'ny tamba-jotra ianao.
Sokafy haingana ny baiko amin'ny maha-mpitantana, karazana netsh wlan mampiseho wlanreport Tsindrio ny bokotra Enter Miteraha tatitra tambajotra tsy misy tariby . Ity tatitra ity dia afaka manampy anao hamantatra ny olana, na farafaharatsiny hanome anao fampahalalana bebe kokoa homena ny hafa izay mety afaka manampy. jereo ny fomba Fakafakao ny tatitra momba ny tamba-jotra tsy misy tariby
Atombohy ny fitaovana tambajotra
Mba hivoahana ny olana amin'ny fifandraisana amin'ny Internet sy ny tambajotra amin'ny windows 10, ny zavatra voalohany anoloranay ny famerenana amin'ny laoniny ny solo-sainanao sy ny tambajotra dia misy ny router, modem na switch. Hamelombelona ny rafitra izany, hamaha ny fifandonana lozisialy madinidinika ary hamorona fifandraisana vaovao amin'ny mpanome tolotra Internet (ISP) anao. Eto ny video iray manazava, maninona no mamerina ny olan'ny fifandraisana amin'ny Internet ny fitaovana tambajotra.
Jereo ihany koa ny jiro amin'ny router sy / na modem mamelatra maitso toy ny mahazatra? Raha tsy misy jiro mirehitra aorian'ny famerenana amin'ny laoniny dia mety maty ilay fitaovana. Raha mahazo jiro mena ianao, na jiro herinaratra nefa tsy misy jiro mpampifandray dia mety maty ny ISP anao.
Windows 10 tsy mandeha ny trackpad rehefa niditra ny totozy
Mihazakazaha ilay mpikirakira tambajotra
Windows 10 dia misy troubleshooter adapter namboarina izay afaka mahita sy manamboatra olana iraisana amin'ny Internet sy ny fifandraisana mahazatra. Ampandehano ny troubleshooter ary avelao ny windows hahita sy hanamboatra olana hiteraka olana amin'ny tambajotra sy ny fifandraisana amin'ny Internet.
Tsindrio ny bokotra Windows + X mifantina ny fikirana,
Mandehana any amin'ny Network & Internet, avy eo kitiho ny troubleshooter an'ny Network,
Araho ny torolàlana eo amin'ny efijery hahafahan'ny windows manadihady sy manamboatra ireo olana hita amin'ny fifandraisana amin'ny Internet na tranokala.
Ampifanaraho amin'ny DHCP ny adiresy IP mety
Zahao raha mety ny IP na ny fanonorana DNS mety hiteraka tsy fidirana amin'ny Internet amin'ny windows 10.
Tsindrio ny bokotra Windows + R, karazana ncpa.cpl ary tsindrio ok
Hanokatra ny varavarankelin'ny fifandraisana izany,
Kitiho havanana amin'ny adaptatera tambajotra mavitrika (ethernet / tsy misy tariby) ary safidio ny fananana.
Tsindrio indroa amin'ny protokol internet kinova faha-4, Ary alao antoka fa voafidy izy io mba hahazoana adiresy IP sy adiresy mpizara DNS ho azy. Raha tsy manamboatra fanovana mifanaraka amin'izany.
Avereno ny tamba-jotra sy ny TCP / IP stack
Mbola tsy mandeha ve ny Internet? andramo avereno ny stack TCP / IP ary esory ny fampahalalana DNS amin'ny solosainao. Izay mety hanampy be amin'ny fanitsiana ny ankamaroan'ny olan'ny fifandraisana sy ny tamba-jotra. Averina indray fa tena manampy izany raha manana olana amin'ny tranokala manokana ihany koa ianao.
Ho an'ity sokafy avy hatrany ny baiko amin'ny maha-mpitantana anao Ary manaova baiko etsy ambany tsirairay. Ary tsindrio ny bokotra fidirana aorian'ny tsirairay hanatanterahana ny baiko.
netsh ipconfig / famotsorana
netsh ipconfig / manavao
Vantany vao vita ny manidy ny baiko avy hatrany ary avereno indray ny PC. Jereo izao raha voavaha ny olan'ny fifandraisana internet.
Ampidiro amin'ny Google DNS
Eto ny vahaolana mahomby iray hafa dia manampy ny ankamaroan'ny mpampiasa hanamboatra ny olan'ny fifandraisana internet.
Tsindrio ny bokotra Windows + x fidio ny fifandraisana amin'ny tamba-jotra,
Mandehana any amin'ny fananana, avy eo tsindrio ny fanovana (eo akaikin'ny toerana IP)
Eto dia apetraho ny DNS 8.8.8.8 ary alao ny DNS 8.8.4.4 ary kitiho ny save.
nolavina ny fifandraisana lavitra satria ny solonanarana ny solonanarana sy ny teny miafina
Atsaharo ny mpizara proxy
Misy ny vintana, tsy mandeha ny internet noho ny fanelingelenana ataon'ny mpizara. Andao horavana ity ary zahao ny satan'ny internet.
Tsindrio ny bokotra Windows + R, karazana tsofa.cpl ary tsindrio ok,
Ity dia hanokatra fananana amin'ny Internet, Mandehana amin'ny vakizoro Connections,
Tsindrio ny sehatr'asa LAN, avy eo alaivo antoka fa hamafana ny fampiasana server proxy ho an'ny safidinao LAN
Tsindrio ok, Ampiharo ary ok raha te hitahiry fanovana sy hijerena ny toetoetran'ny internet sy ny tamba-jotra.
Mametaka adapter tambajotra
Ny mpamily adaptatera tambajotra efa lany andro na tsy mifanaraka ihany koa dia miteraka olana amin'ny fifandraisana amin'ny Internet sy ny tambajotra. Raha vao navaozina ho Windows 10 ianao dia azo inoana fa ny mpamily ankehitriny dia noforonina ho an'ny kinova Windows Check teo aloha hahitana raha misy mpamily nohavaozina.
Tsindrio ny bokotra Windows + R, karazana devmgmt.msc ary tsindrio ny bokotra fidirana hanokatra mpitantana ny fitaovana.
Ity dia hampiseho ny lisitry ny mpamily napetraka rehetra amin'ny solosainao.
Hanitatra adaptatera tambajotra, tsindrio havanana amin'ny mpamily adaptatera tambajotra napetraka dia esory ny fitaovana.
Tsindrio esory indray rehefa mangataka fanamafisana ary hamerina ny solosainao.
Windows mametraka ho azy ny mpamily tambajotram-pifandraisana farany rehefa manomboka indray. Raha tsy mahavita toy izany ny windows dia sokafy indray ny manager an'ny fitaovana. Tsindrio ny hetsika avy eo scan ny fanovana fitaovana.
Ho fanampin'izany Ao amin'ny solosaina hafa, tsidiho ny tranokala mpanamboatra mpamily solosaina / tambajotra manana olana. Sintomy ny mpamily adaptatera tambajotra farany misy. Alefaso amin'ny solosaina misy olana amin'ny alàlan'ny USB izany ary apetaho.
Hanova ny toerana fitantanana herinaratra
Averina ho olana eo amin'ny sehatry ny fitantanana herinaratra no antony mahatonga an'io olana io. Azonao atao ny manova ny toerana hanamboarana azy. Ity no fomba:
Eo amin'ny kitendryo, kitiho ny bokotra famantarana Windows ary kitiho X ny Device Manager.
Hanitatra adapter Network, kitiho havanana ny fitaovana fampifandraisan-tserasera ary kitiho ny Properties.
Mandehana any amin'ny tabilao Power Management, ary esory ny boaty raha avelao ny solosaina hamono ity fitaovana ity mba hitsitsiana herinaratra.
Tsindrio OK raha te hitahiry hahitana raha niverina ara-dalàna indray ny fifandraisana Internet anao.
Soso-kevitra: Tena manampy izany rehefa tapaka matetika ny tamba-jotra sy ny Internet.
Miaraka amin'ny Windows 10 nanampy Microsoft famerenana indray ny tamba-jotra Safidy izay manitsy sy mamerina ny fikirakirana ny tambajotra amin'ny fametrahana azy default. manao famerenana indray ny tamba-jotra tokony ho vahaolana tsara hafa hamahana ny olan'ny fifandraisana Internet Windows 10.
Mandehana any amin'ny Settings amin'ny alàlan'ny lakile windows + I
Tsindrio ny Network & Internet ary ny rohy Network Reset.
Safidio ny famerenana izao ary avy eo Eny mba hanamafisana izany.
Ny fanatanterahana an'io hetsika io dia mametaka ireo adapter ao anaty tamba-jotra ary ny fikirana ho azy ireo dia napetraka hatrany amin'ny tsy fetezana
Atsaharo ny solosainao ary zahao raha tsy misy intsony ny olana amin'ny fifandraisana sy ny Internet ankehitriny.
Moa ve ireo vahaolana ireo nanampy tamin'ny famahana ny olan'ny fifandraisana sy ny fifandraisana amin'ny Internet amin'ny windows 10? Ampahafantaro anay ireo hevitra etsy ambany
Fomba 3 hamahana ny adiresy IP ao amin'ny Windows 10 .
Mifandray WiFi fa tsy misy Internet Access Windows 10 (5 Fiasa miasa)
Mpanjifa tambajotra tsy hita taorian'ny fanavaozana Windows 10? Andramo ireo vahaolana ireo
Voavaha: Windows 10 Tsy afaka mifandray amin'ity tamba-jotra ity (WiFi)
Dingana 7 famahana olana voalohany hamahana olana Windows 10
Nijanona tsy niasa ny fampiharana mpampiantrano radeon
amboary ny olan'ny fifandraisana amin'ny tamba-jotra amin'ny windows
Itunes dia tsy afaka nifandray tamin'ity iphone tsy fantatra tsy fantatra 0xe80000a ity
Windows 10 dia tsy hanidy ny famerenana indray
chrome tsy misy audio windows 10